छठको उमंग चिस्याउने दुर्घटना सधैकालागि दर्द बन्यो « News24 : Premium News Channel
छठको उमंग चिस्याउने दुर्घटना सधैकालागि दर्द बन्यो
एक दिन अघि खुसी हुँदै विदा गरेका आफन्त सदाका लागि विदा होलान् भन्ने परिवारलाई के थाहा ? यतिवेला पीडाको भूमरीमा रहेका सप्तरीबासी अध्याँरो अनुहारमा छन् । पर्वपश्चात पीडाको पहाड खस्यो । चाडपर्व पश्चात चिन्ताको चाङ थपियो । छठको उल्लास सकेको २४ घण्टा नवित्दै सप्तरी यतिखेर शोकमा डुबेको छ ।
सदरमुकाम राजविराजवाट खुलेको यात्रुवाहक वस शनिवार विहान त्रिसुली नदिमा खसेर दुर्घटना ग्रस्त भएपछि यतिखेर सप्तरी शोकमा डुबेका हो । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रायःजसो सप्तरीकै थिए । छठ पर्व मनाएर फर्केका आफ्न्तजन दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएको खवर पाए लगत्तै उनीहरुको परिवारमा रुवावासी चलेको छ ।
दीर्घायूको आशिर्वाद थाप्दै विदा भएका सप्तरीका २४ लाई थाहा थिएन, मृत्युको मुखमा जाँदैछु भनेर । अघिल्लो दिन निकै खुसीका साथ ताल तलैयामा छठ पर्वको शुभकामना साटासाट गरेको काठमाडौं फर्किका उनीहरु नदीमै आफ्नो इहलिला समाप्त होला भन्ने किन पो सोच्थे र ? ३१ को ज्यान जाने गरि गत शनिबार धादिङको बांगेमोडमा भएको बस दुर्घटनामा परेका मध्ये २४ जना सप्तरी जिल्लाकै थिए ।
यतिवेला आशुको आहालमा डुब्न बाध्य सप्तरी यतिवेला स्तव्ध छ । कालको घाट झैं मानिने पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङका कति स्थानमा यस्तै नियति बेला–बेला हुने गरेको छ । दोष निर्माणमा हो वा चालक आफैंको प्रश्न शोकाकुल सप्तरीवासी गर्दैछन् । सप्तरी प्रहरीका अनुसार मृत्यु भएका सप्तरीको २४ मध्यै हाल सम्म २२ जनाको शव सप्तरी पुर्याइएको छ ।
सप्तरी तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर १ तिलाठी गाउँको शोक त आफैंमा दुःखको भेल झैं रहेको छ । तिलाडीका एकै परिवारका ६ सदस्यले ज्यान गुमाउँदाको पीडा त्यो परिवारले कसरी पो सहन सक्ला ? छोरा, बुहारी, नाति, नातिनीहरुलाई छठ पर्वको विहानै आर्शिवाद दिएर पठाएका ८० बर्षिय रमानाथ झा सन्तानहरुको सामुहिक निधनको खवरले स्तब्ध छन् । बृद्ध वुवाको आँखामा आशु समेत आउँदैन । पीडाको पहाडै खस्दा आशु सिवाय यतिवेला उनीहरुसँग केही छैन । दीर्घायु र सुख शान्तिको कामना गर्दै छठको महोत्सव मनाएको २४ घण्टा नवित्दै पीडाका आशु छचल्कदा गाउँ नै उजाड बनेको छ ।
बृद्ध रमानाथ झा अवकास प्राप्त प्राथमिक शिक्षक हुन् । सम्पतिका नाममा आफ्नो परिवार मात्र रहेका झा बोल्न समेत सक्दैनन् । यसैपनि पीडाको भारी बोकेका झा परिवार आफैंमा टुहुरो झैं बनेको छ । पीडादायी दुर्घटनामा दोष कस्को पत्ता लगाउन आवश्यक छ । अनि मात्र पीडितको आशु पुछिएला । अनि मात्र दुःखको भूमरीमा केही राहत होला । सडक निर्माण नै दोषी हो वा चालक ? प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ । अन्यथा झा परिवारले झैं कैंयौं नेपालीको राजधानी काठमाडौं आउने रहर आशुमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।